Nkpọrọ ụkwụ na ntan; Onye agha Warrior Forum In Today's Internet Marketing
E nwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na ebe nrụọrụ weebụ na-ahụ maka mgbasa ozi ịntanetị, ma ebe kachasị ewu ewu bụ Warrior Forum, nke a makwaara dị ka WF. Dị ka ịntanetị ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi, ị kwesịrị ịṅa ntị na ihe na-eme gburugburu na otu esi enweta uru site na azụmahịa ịntanetị n'ụzọ ka mma. Ọ dị mma ịsị na Warrior Forum bụ ihe bara uru bara uru nke na-enyere gị aka ịma ihe niile gbasara ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị.
O siri ike ịghara ịkọwa na Warrior Forum nwere uru na ọghọm ya - codice carrello php. Ihe kachasị mma bụ na ụlọ ọrụ a nọgidere na-arụsi ọrụ ike n'oge niile ma nwee azịza maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ajụjụ niile metụtara ahịa.
Gaa na ndụmọdụ ndị dị n'okpuru site na Igor Gamanenko, onye ọkachamara kachasị elu nke Semalt , iji nweta azịza ziri ezi nye ajụjụ gị.
1. Ụlọ Agha
Ụlọ Agha ahụ bụ ngalaba a kwụrụ ụgwọ nke ụlọ ọrụ a ma nye anyị ozi bara uru gbasara ngwaahịa ndị na-agba. Ndị a nwere ọgụgụ isi na ndị ahịa ịntanetị na-akụ aka ma na-atụle ihe omume ha kwa ụbọchị, mana ọ gaghị ekwe gị omume ịbanye na ngalaba a ruo mgbe ị kwụrụ ụgwọ ndị otu.
2. N'ịbụ ndị ndị Businessmen
Ndị legit ndị e nyere na ngalaba a bụ Rand Fishkin (Moz), Patrick Sexton (Feed The Bot), Pat Flynn (Smart Passive Income), Brian Clark (CopyBlogger), na Yaro Starak (Entrepreneurs Journey).
Nsogbu nke Warrior Forum
A kọwara isi nsogbu ndị a na ikpo okwu a n'okpuru ebe a.
Akwụsịla nke Bekee bụ otu n'ime nsogbu ndị dị mkpa na ndị agha Warrior Forum, achọpụtala m na ọtụtụ ndị ọrụ n'elu ikpo okwu a amaghị ọbụna otú e si ede Bekee. ezighi ezi okwu ha ma rịọ maka enyemaka site n'aka ndị ọkà okwu Bekee.
2. Ajụjụ Ndị M Kpebisiri Ike ugboro ugboro
Nsogbu ọzọ na usoro ihe a bụ otu ajụjụ a ka ugboro ugboro kwa ụbọchị. Ndị Agha Warrior na - emepụta ọgbaghara maka ndị ọrụ ọhụrụ na ndị dị ugbu a dịka ndị ọhụrụ na - ajụ ihe ndị dị ka "otu esi edepụta ebe nrụọrụ weebụ," "ngwaahịa a ọ na - arụ ọrụ nke ọma," na ihe ndị ọzọ.
3. Ndị Òtù Na-enweghị Aka
Imirikiti ihe ọmụma dị na nke a nwere maka ndị nweere onwe ha, nke pụtara na ọ dịghị mkpa ka ị kwụọ ụgwọ ihe ọ bụla ịmatakwu banyere usoro nke ịrụ ọrụ n'ịntanetị. Mpempe akwụkwọ nke ya na-ekpuchi ọtụtụ isiokwu dịka ahịa ahịa n'ịntanetị, ahịa ịntanetị, weebụsaịtị e-commerce, SEO, ahịa email, mgbasa ozi mgbasa ozi na isiokwu ndị yiri ya. Na atụmatụ, e nwere ihe karịrị iri atọ dị iche iche ebe a na-atụle ọtụtụ isiokwu kwa ụbọchị.
4. Guru wannabe
N'ọnọdụ yiri nke ịjụ ajụjụ, achọtara m ụfọdụ guru wannabes ebe ndị mmadụ na-achọ ịhụ ya n'anya tupu ha amalite ọrụ ha n'Ịntanet. Ozi a nwere ike ịba uru maka ndị chọrọ ka ha na-achọ mmụọ ma ọ bụ chọrọ ịmịnye mkpịsị ụkwụ ha n'ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi.
5. Onye Agha na - ajụ M Ihe ọ bụla
Ngalaba ọhụrụ a nwere ọtụtụ ebe na-adọrọ mmasị na ngalaba mkparịta ụka. N'ebe a ị nwere ike ịjụ ajụjụ ndị metụtara ahịa gị ma melite azụmahịa gị na ịntanetị. Maka ọhụrụ online marketer, akụkụ a nke Warrior Forum nwere ọtụtụ ndụmọdụ, nkuzi, na isiokwu iji nweta uru site. Ị nwere ike ịdụ ndụmọdụ n'aka ndị ọkachamara banyere otu esi eme ka ndị ọchụnta ego nwee ọganihu n'ime ọnwa. Site na ime ndụmọdụ ha, ị nwere ike ịmepụta ụzọ gị ma nwee ike ịmalite azụmahịa gị ngwa ngwa.
Site na akụ nke ndụmọdụ, aghụghọ, na ozi bara uru, Warrior Forum dị mma maka ndị na-achọsi nkuzi maka mgbasa ozi ọha na eze na ịntanetị ahịa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ebe nrụọrụ weebụ, ịnwere ike ịbanye na ikpo okwu a iji mụta ọtụtụ ihe site na ahụmahụ ndị agadi gị